Lahatsoratra momba an'i Ozbekistan
Jona 15, 2021 Antika Kumari ny vola, Uzbekistan
Uzbekistan dia firenena sovietika taloha tany Azia afovoany. Moske, mausoleum, ary toerana hafa mifandraika amin'ny làlan'ny landy, làlam-barotra mifandraika amin'i Shina sy Mediteraneana no malaza. Ny Registan, kianja malalaky ny fivavahana telo tsara tarehy sy rakotra mozika
Xiaomi Redmi Note 8 Pro misy any Ozbekistan - tsikera, famaritana ary vidiny
Febroary 27, 2021 Demi zavatra vidiana, Uzbekistan
Izaho dia nitady smartphone Xiaomi Redmi Note 8 pro azo vidina any Ozbekistan ary hitako ireo safidy roa azo atao amin'ny vidiny mirary. Mitovy loko izy ireo, volomboasary hariva, nefa miaraka fotsiny
Telefaonina malaza 5 misy any Ozbekistan - Febroary 2021
Febroary 21, 2021 Demi zavatra vidiana, Uzbekistan
Izaho dia nitady finday dimy azo vidiana sy aterina any Ozbekistan. Ny vidin'izy ireo dia iray amin'ireo tsara indrindra azonao jerena amin'ny Internet ho an'i Ozbekistan. Mila manana faharetana kely fotsiny ianao mandritra ny roa herinandro
Toerana fizahan-tany 14 Ozbekistan
Novambra 15, 2020 Maitri Jha zavatra atao, Uzbekistan
Ny fizahantany mpizahatany any Ozbekistan Ozbekistan dia repoblika sovietika taloha ary firenena Azia afovoany. Izy io dia malaza amin'ny moske sy mausoleum ao aminy. Manana tranokala mifandraika amin'ny làla landy, ny làlam-barotra Sina-Mediterane taloha. Famantarana ny Silamo